Phakathi Kwethu Hacks 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Thola ukuthi ngubani owenza okusolisayo ngokushesha kunabaningi, noma ubulale lonke iqembu ngaphandle kokucupha i-alamu - Phakathi kwethu uCoco ekugcineni wenze indlela eya eGamepron!
Usuvele uthenge iHack Us Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-hacks ethu Phakathi Kwethu, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kubuyekezwa noma liseseku-inthanethi Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu Phakathi Kwethu Hacks
Phakathi Kithi Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & More
Coco likaHack yilelo elaligqokwe
Thenga Phakathi Kwethu Ama-Hacks angenile 4 izinyathelo
Khetha umdlalo ofuna ukuwudlala kusuka ekukhetheni kwethu okukhulu kwezihloko ezidumile
Khetha i-hack efaka zonke izici ozidingayo ukuze ubuse umncintiswano!
Lapho usukhethe ukugenca, yenza inkokhelo yakho usebenzisa izinketho zethu zokukhokha eziphephile eziyi-100%
Ngemuva kokuthenga ukhiye wakho womkhiqizo ungawusebenzisa ukulanda phakathi kwethu i-Coco ngokushesha!
Kungani i-Gamepron Phakathi Kwethu i-hacks
IGamepron ibilokhu iziqhenya ngekhwalithi yokukhishwa kwethu, futhi Phakathi Kwethu Coco bekungeke kube njalo. Uma ungathola ithuluzi elitholakala lapha, izingqinamba kuzoba ithuluzi elihle kakhulu elenzelwe lowo mdlalo - sisebenza kuphela ngamathuluzi amahle kakhulu nabathuthukisi abaseduze nokuqinisekisa ukuthi izinga lethu lekhwalithi lihlangatshezwa njalo. Awusoze wanikezwa ithuluzi lokuswela uma uthenga ukhiye womkhiqizo ku-Gamepron, futhi akudingeki nokuthi uzinikele kunketho eyodwa! Sikunikeza zonke izici (bese kuthi ezinye) zidinga ukuwina cishe wonke umdlalo we-Among Us owudlalayo, okuwubufakazi bamandla Phakathi Kwethu Coco.
Le nombolo yezici ayikaze ibonwe phakathi kwethu phambilini, futhi sihlala sifuna izindlela zokufaka okuningi. Vula zonke izinto ezitholakala ngaphakathi komdlalo futhi wenze uhlamvu lwakho lubukeke njengochwepheshe onesipiliyoni, noma ungavumela i- "Killer Mod" ukukhombisa lapho uMbulali ekhona ngaso sonke isikhathi! Ngamanani entengo afanele, inqwaba yezinketho zesikhathi ezahlukahlukene, nezici eziningi ezake zabonwa kuHack Us Hack, sizizwa ngokweqiniso ngathi iGamepron ilungele noma ngubani.
Phakathi kwethu i-Coco yasungulwa ukusiza abadlali be-novice ukuthi bazuze ubukhulu ngaphandle kwawo wonke umsebenzi onzima, futhi kuvumela nabadlali abancintisanayo ukuthi bagcine "onqenqemeni" lwabo. Akekho umuntu othanda ukulahlekelwa emidlalweni yevidiyo, ngisho nalowo odinga ukuxazululwa kwezinkinga nokwenza ngezikhathi ezithile! IGamepron ibugcinile ubudlelwano obuqinile nabo bonke ozakwethu bezentuthuko futhi, ngakho-ke siyazi ukuthi yini esingayilindela kubo ngalesi sikhathi. Kungakho futhi sikwazi ukuhambisana nanoma yiziphi izibuyekezo noma ukulungiswa okungenziwa phakathi kwethu, okuvumela abathuthukisi ukuthi benze ukulungisa futhi badedele amabala okusiza abasebenzisi beGamepron.
Abasebenzisi bamanje be-Among Us Coco hack abanalutho ngaphandle kwezinto ezinhle abangazisho ngokukhohlisa, okuwumphumela oqondile wokuzinikela kwethu kwikhwalithi. Ngeke uqaphele ama-glitches noma ube nenkinga ngokulungisa izilungiselelo ze-hack, konke kupholisiwe ukuze kuqinisekiswe isipiliyoni somsebenzisi (futhi esihle!). Noma ngabe unguMkhohlisi noma uyingxenye yeCrew, ukusebenzisa i-Among Us Coco kuzokusiza ukuthi ufeze amazinga wobukhulu obubonakala sengathi awuzwakali. Hlala uphephile (kodwa uyingozi!) Ngokuthenga ama-hacks akho phakathi kwethu kusuka ku-Gamepron, umthombo ongu- # 1 wama-hacks online.
Phakathi Kithi Khombisa i-mod killer
Phakathi kwethu Imininingwane yomdlali ESP
Phakathi Kithi Khombisa izipoki
Phakathi kwethu Umbono we-Ghost
Phakathi kwethu kukwenza umkhohlisi
Phakathi kwethu isivinini Boost
Phakathi kwethu imisebenzi eqediwe njengomkhohlisi
Phakathi Kwethu Ukucekelwa okungapheli
Impela Phakathi Kwethu Hack Izici
Phakathi Kithi Coco Player ESP
Ukusebenzisa isici se-Player ESP kuzokunikeza ukufinyelela kukho konke ukubuka kwemephu! Bona wonke umdlali oyedwa kumdlalo usebenzisa i-Gamepron.
Among Us Coco Player imininingwane ESP (Igama, ibanga)
Ukubona imininingwane yabadlali (njengamagama abo nebanga labo) kungasiza kakhulu ngenkathi udlala phakathi kwethu! Kokubili amalungu e-Killer and Crew angakwazi ukuphefumula kalula manje.
Phakathi Kwethu Coco Ghost Vision
Bona ukuthi zonke izipoki zicashe kuphi ngokunika amandla imodeli ye-Among Us Coco Ghost Vision. Bona lapho ingozi ilele khona futhi uyigweme!
Phakathi Kwethu Coco Infinite Sabotage
I-Sabotage ngokuthanda ngokunika amandla i-Among Us Coco Infinite Sabotage equkethe, ikunikeza ithuba lokuwina kungakhathalekile ukuthi abanye abadlali benzani.
Phakathi Kithi Coco Impostor Mod
Sebenzisa i-Among Us Coco Impostor Mod ukuze uqinisekise ukuthi unguMkhohlisi ngaso sonke isikhathi! Lawula umdlalo kusukela ekuqaleni usebenzisa Phakathi Kwethu Coco.
Phakathi Kwethu Coco Kill Cooldown Mod
Ikhawunta yeKill Cooldown ingaba yinkinga ngezizathu eziningi, kepha ungayisusa ngokuphelele lapha eGamepron - akekho ongakuvimba manje!
Phakathi Kithi Khombisa Ghost Mod
Khombisa zombili uMbulali nezipoki usebenzisa isimanga sethu Phakathi Kethu Coco Show Mod, etholakala kuphela lapha eGamepron! Asikho isidingo sokucasha
Phakathi Kithi Coco Tasks Mod
Ungakhetha ukuqedela imisebenzi njengoMkhohlisi (futhi ukhohlise indlela yakho eya empumelelweni), inqobo nje uma kunguwena muntu osingathile.
Phakathi Kwethu Coco Speed ​​Boost
Isikhathi siyinto esemqoka, ngakho-ke yonga kakhulu ngokunika amandla isici se-Among Us Coco Speed ​​Boost. Sheshisa ngokusebenzisa imisebenzi!
Phakathi Kwethu Coco Khubaza Ukubambezeleka Kwengxoxo
Ukukhubaza ukubambezeleka kwengxoxo kuzokunikeza ithuba lokwenza ngokushesha njengoMkhohlisi, futhi kuvimbele Abasebenzi ekuxhumaneni ngempumelelo ngendlela ebebengenza ngayo ngenye indlela.
Kunzima ukubeka ukuthi lokhu kusiza kuwusizo kangakanani kumagama, kepha sizozama noma kunjalo - lena yimali engcono kakhulu noma yimuphi umdlali Osekhona ongayisebenzisa. Uma umubi ngokuqamba amanga futhi ungakwazi ukunqoba phakathi Kwethu ngendlela yendabuko, kungani ungavele uphendukele ekukhohliseni? Ekupheleni kosuku, imidlalo imayelana nokuzijabulisa, futhi ukusebenzisa i-Among Us Coco kungasiza ngalokho.
Okudumile Phakathi Kwethu Hacks futhi Ukukopela
Phakathi Kwethu Ama-Mod Mods
Phakathi Kithi Ghost Vision
Phakathi Kwethu Speed ​​Boost
Okunye Phakathi Kwethu Hacks futhi Cheats
Okudumile Phakathi Kwethu Coco Hacks futhi aphambe
Phakathi kwethu bekukhona ubuhlanya cishe buphelele be-2020, futhi lokho kuyaxaka uma ucabanga ukuthi ikhishwe cishe eminyakeni eyi-2 eyedlule. Manje njengoba ekugcineni abantu sebetholile ngalo mdlalo omangazayo, bathutheleka kuwo njengezimvu - inkinga okukhona nje lapho ukuthi kuzobakhona “ukujuluka” okumbalwa kule nhlanganisela. Uma ufuna nje ukuzijabulisa, awukwazi ukwenza kanjalo lapho kunabadlali abancintisanayo abagcwele kuyo yonke indawo yokwamukela izivakashi, kepha ukusebenzisa i-Among Us Coco kungakulungisa lokho! Ukusebenzisa Phakathi Kwethu Coco ukuthola inzuzo kungasebenza kunoma yimuphi umdlali, hhayi abafikayo nje; ngisho nabadlali abanolwazi kakhulu phakathi kwethu bazophumelela kakhulu ngalokhu kukopela kunikwe amandla (siyakuqinisekisa).
I-Gamepron iyikhaya lama-hacks nama-cheats athandwa kakhulu atholakala kuwebhu, ngakho-ke zizwe ukhululekile ukubheka nxazonke bese ubona lokho okufanele sikunikeze. Uma uzokopela nhlobo, sebenzisa i-Gamepron.
Khombisa abasebenzi ukuthi usebenza ngokuzikhandla njengomkhohlisi, noma okuphambene nalokho, usebenzisa i-Among Us Coco Task Mod. Ungashintsha inani lemisebenzi eqediwe (noma edinga ukwenziwa) eqenjini ngalinye, okuwukuphela kwesidingo ukuthi ungumphathi womdlalo wakho. Uma ungeyena umphathi, awukwazi ukulungisa izilungiselelo zenethiwekhi namakhasimende ngokufanele, ngakho-ke ngeke ukwazi ukusebenzisa i-Among Us Coco Task Mods. Ilusizo kakhulu uma uzama ukuthola ukuwina okusheshayo noma ufuna ukuthi uMbulali / uMkhohlisi azizwe sengathi balahlekelwa yisikhathi esiyigugu. Noma yini ongayenza ukuze uphumelele ngomdlalo owodwa bese ungena kokulandelayo uzozizwa uzuzisa, futhi yilokho kanye okukhona phakathi kwe-Us Us Coco okukuvumela ukuthi ukwenze ngama-Task Mods.
Bobabili abadlali abasha nabanolwazi bangazuza kulokhu, ngoba konke okwenzayo kunciphisa isikhathi osichitha wenza imisebenzi engasho lutho.
IGhost Vision izonikeza amalungu eCrew ithuba lokuthi abone lapho kutholakala khona amaGhost, okusho ukuthi awudingi ukuthembela ekuxhumaneni nabalingani bakho nakancane. Akudingeki nokuthi uvulwe imakrofoni uma une-Us Us Coco ukuze uphinde ubuyele kuyo! Bona iMimoya futhi uqaphele, ngoba kulapho uMkhohlisi abulale khona ngaphambilini - ungavumela le nketho ngenkathi udlala bese uyicisha noma kunini lapho uthanda khona, ukuze ungadingi njalo ukuthi ama-Ghosts avela esikrinini sakho. Uma iqembu lakho lingakhulumisani kahle futhi liqala ukwehla njengezimpukane, sekuyisikhathi sokuvula i-Ghost Vision ubone ukuthi konke lokhu kwenzeka kuphi.
Umkhohlisi angathanda igumbi elithile, noma avele akhethe kancane ozakwabo. Kunoma ikuphi, ukusebenzisa iGhost Vision kuzokunikeza lonke ulwazi oludingekayo ukwenza ukuma kokugcina okuphelele, ukunikeze wena neqembu lakho ukunqoba kule nqubo.
Isivinini sibulala ngisho nasemidlalweni yamasu eyaziwa kakhulu kumuntu, yingakho imodeli ye-Speed ​​Boost yethu yeHack Coco hack iyinto ebaluleke kangako. Lapho udlala njengoMkhohlisi, ukusebenzisa i-Speed ​​Boost mod kuzokuvumela ukuthi usheshise imisebenzi yakho mbumbulu masinyane kunokujwayelekile, futhi ufike kuzisulu zakho ngokuxhamazela - kuyisidingo kunoma ngubani ofuna ukungathí sina ngezindlela zabo zokubulala! Ukwehlisa ilungu leCrew bese ushesha ngokushesha, ngoba ayikho indlela yokuthi noma ngubani azokwazi ukuhambisana nezilungiselelo zemidlalo yesitoko. Imisebenzi kungenzeka ukuthi iyingxenye enzima kunazo zonke phakathi Kwethu, njengoba yenzelwe ukukuphazamisa (ukubeka engozini enkambisweni), kepha i-Speed ​​Boost Mod yethu izokwenza lezo zingqinamba zibe yinto yesikhathi esedlule.
Ungangena emisebenzini ngaphandle kokukhathazeka, njengoba usuvele uyazi ukuthi uzoziqedela ngokushesha.
Iningi lezici ezifakiwe phakathi Kithi Coco zazenzelwe ukukhonza Umkhohlisi, kepha kunezinto eziningi ezisebenzisekayo zamalungu eCrew. Khubaza i- "Kill Cooldown" bese ukhipha i-Crew yonke ngesikhathi esisodwa, noma unike amandla i-Infinite Sabotage futhi umise amalungu e-Crew ekuqedeni imisebenzi yawo. Izinketho eziningi zizokusiza uchume futhi uhlale uphile isikhathi eside, kukunikeze ithuba elihle lokuthola iwini. Uma unguMkhohlisi yindawo yonke yokwamukela izivakashi ekhuphuka izokulwa nawe, kepha noma unezinombolo njengeLungu leCrew, uMkhohlisi usenayo inzuzo.
Vula zonke izinto ezifakiwe kumdlalo usebenzisa le nkohliso! Awudingi ukugaya amahora wegeyimu ukuze uthole izandla zakho kuleso sigqoko esisha esihle, njengoba ukusebenzisa i-Among Us Coco kuzokuvulela yonke into - asikho isidingo sokudlala umdlalo sengathi ngumsebenzi wakho wosuku futhi!
Phakathi Kithi Hacks Imibuzo
Kungani iHacks yethu phakathi kwethu
Labo abake badlala phakathi kwethu futhi basebenzisa ukukopela esikhathini esedlule bayazi ukuthi kulula kanjani ukuvinjelwa nokujeziswa ngokugenca. Kusetshenziswa Phakathi Kwethu Coco kuqinisekisiwe
indlela yokuhlala uphephile, njengoba iGamepron ihlala inikezela abasebenzisi bethu ngamathuluzi angatholakali. Ukugenca nomhlinzeki ongu- # 1 online bese ugcine i-akhawunti yakho (nayo yonke intuthuko yakho) iphephile!
Kungani i-Speed ​​Speed ​​Boost yethu iphakathi kwethu
Ijubane liyimfanelo ewusizo kakhulu ongaba nayo ngenkathi udlala phakathi kwethu ngoba isikhathi sihlala siyinto ebalulekile. Musa ukuchitha umzuzwana owodwa uma usuqalile ukusebenzisa i-Among Us Coco Speed ​​Boost, konke okungatholakala ngaphandle kokubeka i-akhawunti yakho engcupheni. Kulula ukuyisebenzisa futhi, okuyibhonasi kumakhasimende ethu amaningi!
Kungani yethu phakathi kwethu Ghost Mod
Ama-Ghost Mods akuvumela ukuthi ubone lapho abalingani bakho bebulewe njengeLungu leCrew, okungaba wusizo olukhulu lapho kulandelwa uMkhohlisi. Ungabheka lapho kushonele khona ozakwenu, uthole nethuba lokuxhumana nabo. IFull Vision iyisici abadlali bethu abathanda kakhulu phakathi kwethu, futhi sinethemba lokuthi uzokujabulela futhi.
Kungani ama-Mods ethu aphakathi kwethu
Ama-Task Mods angasetshenziselwa ukubambezela inqubekela phambili yeqembu lakho eliphikisayo, noma ngabe kusele abambalwa kuphela noma iqembu lonke lisakhahlela akubalulekile. Ama-Task Mods angasetshenziswa kuphela uma ungumbungazi, kepha uma kwenzeka ukhubeka kuleso simo, qiniseka ukuthi ulayishe i-Among Us Coco futhi ukulungele ukuya!
Kungani ukubambezeleka kwethu phakathi kwethu kuxoxa
Ukusebenzisa i-Chat Delayer yethu uma unguMkhohlisi kufanele, ngoba kuzovimba elinye iqembu ekuxhumaneni ngemininingwane ewusizo komunye nomunye. Uma othile ekubona ubulala umdlali bese beshaya i-Panic Button, ungavele ulibazise ingxoxo ukuze kungabikho muntu okhulumayo. Uma bengakwazi ukusabalalisa amahlebezi okuthi wena unguMkhohlisi, uzolahlekelwa kanjani?
Ungalanda kanjani okuhamba phambili phakathi kwethu?
Ukukhathazeka kokulanda ukulanda nokufaka ama-hacks akho phakathi kwethu kuyinto yesikhathi esedlule, njengoba i-Gamepron ikwazile ukwenza lula inqubo yonke. Akusadingeki ukuthi ubhekane nokufakwa ngesandla, okunikeza abasebenzisi ithuba lokuphumula. I-hack ngeke ifakwe ngokungalungile, njengoba kuyinqubo ezenzakalelayo ngokuphelele ephathwa yodwa (asikho isidingo sokuba yi-tech geek).
Kungani ama-hacks akho phakathi kwethu ebiza kakhulu kunamanye
Uzohlala uphephile lapho usebenzisa ama-cheats avela ku-Gamepron, njengoba singeke silinge ukubamba ama-hacks. Phakathi kwethu i-Us Coco ifaka ukuvikelwa kwe-stellar anti-cheat, okuvumela ukuthi ungene ngaphandle kokukhathazeka ngokuvinjelwa - kukhona nenani elilinganiselwe lama-slots atholakalayo, ngakho-ke asikwazi ukuvumela wonke umuntu ofuna lezi zingxoxo ukuthi afinyelele kuzo. Ukuba wedwa nokuphepha yizizathu zokuthi kungani sikhokhisa imali ekhokhwayo.
I-Gamepron yaziwa ngokusebenzela umsebenzisi ngokusemandleni ethu, futhi lokho kufaka ukunikela ngezinketho eziningi ezahlukahlukene zokhiye womkhiqizo. Ungakhetha ukuthenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1, isonto eli-1, noma ukhiye womkhiqizo wenyanga engu-1, konke kuyindaba yokuthandayo. Cabanga ukuthi ufuna ukufinyelela isikhathi esingakanani kuma-cheats bese uthenge ukhiye womkhiqizo ofanele, lokho kulula impela!
Awesome Phakathi Kwethu Hack Izici